राशिफल हेरेर जान्नुहोस् कस्तो छ त तपाईको आजको दिन ! « Sansar News
राशिफल हेरेर जान्नुहोस् कस्तो छ त तपाईको आजको दिन !
१७ मंसिर २०७७, बुधबार ०७:३३
प्रयत्न गर्दा विश्वास नलागेको काम समेत बन्न सक्छ । छोटो समयमा राम्रो उपलब्धि हातपार्न सफल भइनेछ । स्रोत(साधन जुट्नाले गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । लाभांश बढ्नाले दैनिकीमा परिवर्तन आउनेछ । रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ । उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ । शत्रु र प्रतिस्पर्धीलाई सजिलै हराउन सकिनेछ ।
काममा राम्रो सुरुवात हुनेछ तर अन्त्यमा सोचेजस्तो नतिजा नआउन सक्छ । धेरै बोल्दा गोपनीयता बाहिरिन सक्छ । विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन् तर काम पूरा गर्न समय लाग्नेछ । आलोचकहरूलाई व्यवहारले समेट्ने प्रयास गर्नुहोला। शुभचिन्तकहरूको साथ भने पाइनेछ । लगनशीलताले मात्र संकल्प पूरा गर्न सकिनेछ । प्रयत्न गर्दा प्रतीक्षा गरिएको काम बन्न सक्छ ।
आफ्ना कमजोरीमाथि टिप्पणी हुने समय भएकाले बोली(व्यवहारमा सजग रहनुपर्ला। केही गुमाउनुपरे पनि लेनदेन, सरसापट र वादविवाद सुल्झाउने समय छ । शुभचिन्तकहरूको साथ जुट्नाले चिताएका काम सम्पादन हुनेछन् । प्रक्रिया दोहोर्याउनुपरे पनि अन्ततः आफैंलाई फाइदा हुनेछ । व्यापारमा लाभ हुनेछ । बिछोडिएका आफन्तसँग भेटघाट हुनेछ ।
आकस्मिक खर्च बढ्नाले अर्थ अभाव देखापर्न सक्छ । लगानी बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आउन सक्छ । आक्षेप लगाउनेहरू सक्रिय हुनेछन् भने सहयोग गर्नेहरू कमै भेटिनेछन् । बेलैमा होस नपुग्नाले चुनौतीसमेत आइलाग्न सक्छ । शुभचिन्तकहरू समेत टाढा हुने समय छ । धेरै लगानी गर्दा कममात्र फाइदा हुनेछ । अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ला ।
परिश्रम परे पनि कम प्रतिफलमा चित्त बुझाउनुपर्ला । आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन् । तर आफ्नो मिहिनेतबाट अरूले फाइदा उठाउने कोसिस गर्लान् । आम्दानी भए पनि फजुल खर्च बढ्नाले अर्थ अभाव देखा पर्नेछ । अपिरिचित व्यक्तिको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ । सापटी रकम फिर्ता लिन मुस्किल पर्नेछ । उपलब्धिका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ला ।
धेरै कामको दायित्व लिनाले बढी परिश्रम गर्नुपर्ला । तापनि प्रयत्न गर्दा आंशिक लाभ हुनेछ । विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् भने दिगो काममा जग बसाउने मौका छ । उपलब्धिको स्रोत प्राप्त हुनेछ भने व्यवसायमा पनि सामान्य फाइदै हुनेछ । तर, बेलैमा होस नपुग्नाले चुनौतीसमेत आइलाग्न सक्छ । शुभचिन्तकहरू टाढा हुनेछन् । धेरै लगानी गर्दा कममात्र फाइदा हुनेछ ।
परिबन्धले अप्ठ्यारो स्थिति निम्त्याउन सक्छ । सम्भावना देखिए पनि सोचेको उपलब्धि प्राप्त नहुन सक्छ । कामको चाप बढ्नेछ भने शरीरमा कमजोरी तथा आलस्य अनुभूति हुनेछ । स्वास्थ्यका लागि व्यायाम तथा आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला । प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिनाले काम दोहोर्याउनुपर्ला । गोप्य सूचना बाहिरिनाले पनि समस्या पर्न सक्छ ।
घुमफिर तथा मनोरञ्जनमा समय बित्नेछ । भेटघाटमा अलमलिनुपर्ला। लोकाचारका लागि दिन खर्चिलो बन्न सक्छ । तापनि व्यवसायले रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर दिलाउन सक्छ । प्रियजनसँग भेटघाट हुनुका साथै आतिथ्यपूर्ण सम्मान प्राप्त हुनेछ । मिहिनेत गर्दा महत्त्वाकांक्षी काम सम्पादन हुनेछ । केही रकम रोकिए पनि व्यापारमा मनग्गे धनलाभ हुनेछ ।
लगनशीलताले अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिनेछ । भौतिक साधन जुट्नाले दिन उत्साहजनक रहनेछ । शत्रुभाव राख्नेहरू स्वयं कमजोर हुनेछन् । बुद्धिको उपयोगले अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ । दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ। लामो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । मिहिनेतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्छ ।
लक्ष्यअनुसार काममा जुट्न नसकिए पनि प्रयत्न गर्दा चिताएका काम सम्पादन हुनेछन् । अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। सहपाठीहरू पछि पर्नेछन् । मिहिनेतले प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका दिलाउनेछ । व्यापारमा धेरै फाइदा नभए पनि पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्नेछ । सन्तान वा अनुयायीको साथले उत्साह जगाउनेछ ।
बेसुरमा वचन दिने बानीले समस्या निम्त्याउनेछ । साझेदारीमा पहिलेको सम्झौता भंग हुन सक्छ । रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा लाभ हुनेछ । अरूको सुझावमा भर नपर्नुहोला । परिवारजनको सहयोग लिँदा राम्रो हुनेछ । घरमा लक्ष्मी भित्र्याउने समय छ । मेहनत गर्दा पछिलाई फाइदा हुनेछ । आफ्ना महत्त्वाकांक्षी योजना तत्काल सार्वजनिक नगर्नुहोला ।